बिहीबार, फेब्रुअरी 25, 2021 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
म कसरी सुरू गर्ने सामाजिक संजाल? यो एक प्रश्न हो जुन मैले प्राप्त गर्न जारी राख्छु जब म सामाजिक 'मार्केटिंग प्रयासहरूमा सामाजिक मिडियाको प्रभावमा बोल्छु। पहिले, छलफल गर्नुहोस् तपाईंको कम्पनी किन सामाजिक मिडियामा सक्रिय हुन चाहन्छ।
कारण किन व्यवसायहरू सामाजिक मिडिया मार्केटिंग प्रयोग गर्छन्
यहाँ एक शानदार स्प्यान्डर भिडियो छ तरीका छ कि तपाइँको सामाजिक मिडिया मार्केटिंग को लागी व्यापार परिणामहरु।
कसरी सामाजिक मिडिया को साथ शुरू गर्ने
तपाईंको सामाजिक नेटवर्क छनौट गर्नुहोस् - प्रत्येक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको बीचमा अद्वितीय उद्योग समूह र ग्राहकहरूको खोजी गर्नुहोस्। म केवल एउटा छनौट गरेर अर्कोलाई बेवास्ता गर्ने फ्यान होइन। मलाई विश्वास छ कि तपाईले सबै प्लेटफर्महरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ - तर ध्यान दिनुहोस् र लक्षित गर्नुहोस् जहाँ अवसरहरू वृद्धि हुन थाल्छन्। यो इन्फोग्राफिक प्रति डेमोग्राफिकको बारेमा मात्र होइन।
तपाईंको प्रोफाइल भर्नुहोस् - जब म एक जेनेरिक प्रोफाइल फोटो, हराएको पृष्ठभूमि, वा एक अपूर्ण प्रोफाइल देख्छु, म सँधै निम्न माध्यमबाट कम्पनी वा व्यक्तिसँग मिल्दो वा सामाजिक मिडियामा संलग्न हुनेमा हिचकिचाउँछु। तपाईंको समय सेट अप गर्नुहोस् र प्रदान गर्नुहोस् एक अनौंठो, तर स्पष्ट प्रोफाइल जुन त्यहाँ तपाईंको उपस्थितिको लागि संचार गर्दछ।
तपाईंको आवाज र टोन फेला पार्नुहोस् - ब्रान्ड स्थिरता अनलाइन महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक मिल्दो टोन स्थापना गर्नुहुन्छ जब सामाजिक मिडियामा सेयर गर्ने र प्रतिक्रिया गर्ने क्रममा। दिमागमा राख्नुहोस् कि यो त्यहाँ व्यस्त छ, चर्को विश्व छ, बोरिंग नगर्नुहोस्!
दृश्यहरू सम्मिलित गर्नुहोस् - छविहरू र भिडियोहरूले तपाईंको सामाजिक मिडिया अपडेटको संलग्नता र साझेदारीलाई प्रभाव पार्दछ। फोटोहरू लिनुहोस्, भिडियो समावेश गर्नुहोस्, केहि वास्तविक-समय भिडियो खण्डहरू योजना गर्नुहोस्, र अनलाइन कथाहरूमा केहि भिडियो शर्टहरू साझेदारी गर्नुहोस् जुन तपाईं संलग्न हुन चाहानुहुन्छ प्रत्येक प्लेटफर्मको अधिकतम बनाउन।
तपाईंको पोस्टिंग रणनीति छान्नुहोस् - भर्खरको, लगातार र प्रासंगिक तीन शर्तहरू हो जुन हामीले हाम्रो ग्राहकहरूसँग गत दशकमा धकेल्‍यौं र अर्को दशकसम्म जारी राख्नेछौं। तपाईका अनुयायीहरूलाई मूल्य प्रदान गर्नु अत्यावश्यक छ! म साझेदारीको लागि कुनै पनि अनुपातको प्रशंसक होइन, साझेदारी गर्नुहोस् जब यो तपाईंको दर्शक वा समुदायको लागि मूल्यवान हुन्छ।
ताल विकास गर्नुहोस् - तपाइँका फ्यानहरू र अनुयायीहरू तपाइँबाट भर्खरको र लगातार अपडेटहरू आउने आशा गर्न आउनेछन्। सोशल मिडिया प्राय गतिको खेल हो किनभने तपाईंको सामग्री साझा र सराहना गरिन्छ। सानो सानो र सानो सेयरको साथ सुरुमा निराश नहुनुहोस् ... केवल यसमा काम गरिरहनुहोस् र हरेस नखानुहोस्! यदि तपाईं रोक्नुहुन्छ - कुनै पनि कारणका लागि - तपाईंले प्राय: एउटा महत्त्वपूर्ण ड्रप पाउनुहुनेछ जुन तपाईंले फेरि फेर्नुपर्नेछ।
तपाईंको सामाजिक पात्रो योजना - के तपाइँको ब्यापार को लागी मौसम छ? के त्यहाँ प्रासंगिक तथ्या ?्कहरू छन् जुन तपाईं ब्याकलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको सामाजिक मिडिया प्रोफाइलहरूमा अनुसूची गर्नुहोस्? के तपाई एक शीर्षक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले हरेक महिना वा हरेक हप्ता अनलाइन बारे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईंको सामाजिक क्यालेन्डरको योजना बनाउनु तपाईंको सोशल मिडिया अख्तियार बढाउने उत्तम तरिका हो, र यसले तपाईंलाई भविष्यलाई दिक्क पार्न र भूतका अतीतका मानिसहरूलाई सम्झाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ताकि तिनीहरू तपाईंसँग टाँसिनेछन्।
कार्यलाई कल नबिर्सिनुहोस् - को कानून सधैं बेच्न सामाजिक मिडिया संग काम गर्दैन ... तर सँधै सुचित हुनुहोस्g does! तपाईंको लक्ष्य सूचित गर्नु र तपाईंको नेटवर्कमा मूल्य प्रदान गर्नु पर्दछ। प्रत्येक चोटि एक पटक, तिनीहरूलाई सम्झाउनुहोस् कि तिनीहरूले तपाईं र तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरूसँग स engage्लग्न गर्न अर्को के गर्न सक्दछन्। तपाईंको सामाजिक प्रोफाइलमा कल-टु-एक्शन समावेश गर्नुहोस्, यो अधिक व्यवसाय चलाउनको लागि एक उत्तम निष्क्रिय साधन हो।
यदि म पढाउँदै थिएँ सामाजिक मिडिया मार्केटिंग १०१ वर्ग, म केहि प्रमुख रणनीतिहरू जोड्दछु जुन यो इन्फोग्राफिकबाट हराइरहेको छ:
प्रतिष्ठा अनुगमन - एक महान सामाजिक मिडिया निगरानी उपकरण को उपयोग, तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू, सेवा वा व्यक्ति को कुनै पनि सुन्नु पर्छ। वास्तविक समय अलर्ट र द्रुत प्रतिक्रिया र रिजोलुसनहरू आवश्यक छन्।
सामाजिक खुफिया - सामाजिक मिडियामा संचारले जानकारीको सम्पत्ति प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको कम्पनीले ध्यान दिनुपर्दछ। प्रोस्पेक्ट प्रश्नहरू, ग्राहक प्रतिक्रिया, र प्रचलन जानकारी तपाइँको व्यवसाय मा काम गर्न को लागी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्छ।
ग्राहक सेवा - अब, पहिले भन्दा पनि, उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरूले एकसाथ निगमहरूले सामाजिक च्यानलहरूको माध्यमबाट उनीहरूको ग्राहक सेवा अनुरोधहरूमा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिरहेका छन्। किनकि सोशल मिडिया एक सार्वजनिक फोरम हो, व्यवसायका लागि ग्राहक सेवा मुद्दाहरूको समाधान ल्याउने तिनीहरूको क्षमता प्रदर्शन गर्न यो अविश्वसनीय अवसर हो जहाँ अरूले यसलाई सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने छन्।
लक्ष्यहरू र मोनिटर प्रदर्शन सेट गर्नुहोस् - निम्न कार्यहरू, सment्लग्नता, भावना र साझेदारी जस्ता गतिविधिहरू प्रमुख संकेतक हुन् जसको प्रवृत्ति अनुगमन गरिनु पर्छ। सामाजिक मिडिया जागरूकता चलाउन सक्छ र जागरूकता अधिकार र भरोसा ड्राइव गर्न सक्दछ। प्राधिकरण र विश्वासले खोज इञ्जिन स्तरलाई प्रभाव पार्न सक्छ। र, अवश्य पनि, यी सबैले व्यवसाय परिणामहरू ड्राइभ गर्न सक्दछन् जस्तै धारणा, अधिग्रहण र ग्राहक मान बढेको।
बाट यो इन्फोग्राफिक भेन्गेज सामाजिक मिडिया मार्फत मार्केटिंगको लागि उनीहरूको रणनीति स्थापना र विकास मार्फत एक व्यापार हिड्छ। र त्यहाँ स्थापित राम्रो मार्करको लागि केहि राम्रो सल्लाहहरू छन्!
टैग: ग्राहक सेवासुरु गर्दैप्रतिष्ठा व्यवस्थापनप्रतिष्ठा अनुगमनभावनासामाजिक बुद्धिमत्तासामाजिक संजालसामाजिक मिडिया अधिग्रहणसामाजिक मिडिया लक्ष्यहरूसामाजिक मिडिया प्रदर्शनसामाजिक मिडिया प्रतिधारणसामाजिक मिडिया रणनीतिसामाजिक मिडिया शुरू गर्नुहोस्venngage